Madrid ([mədrɪd /, Spanish: [maðɾið], degaanka [maðɾi (θ)] waa caasimadda Isbania iyo degmada ugu weyn ee labada bulsho ee Madrid iyo Isbania guud ahaan. Magaaladu waxay ku dhawaad ​​3.2 milyan oo qof degaan ku leh degaan weyn oo ku dhow qiyaastii 6.5 milyan. Waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Midowga Yurub (EU) ka dib London iyo Berlin, iyo xarunteeda magaalo weynta waa saddexda ugu weyn ee Midowga Yurub ka dib kuwa London iyo Paris Degmada lafteedu waxay ka kooban tahay aag 604.3 km2 (233.3 sq m).
Madrid ayaa ku taala webiga Manzanares ee bartamaha labada wadan iyo Jaaliyada Madrid (oo ka kooban magaalada Madrid, xaafadeeda iyo xaafado iyo tuulooyin badan); bulshadani waxaa xuduud la leh bulshooyinka madaxbannaan ee Castile iyo León iyo Castile-La Mancha. Magaaladda caasimadda Spain, kursiga dowladda, iyo degenaanshaha boqortooyada Isbaanishka.
Madrid sidoo kale waa xarunta siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqanka ee dalka. Duqa magaalada hadda jira waa Manuela Carmena oo ka tirsan xisbigii Ahora Madrid.
Iskuduwaha magaalooyinka ee Madrid wuxuu leeyahay saddexda dal ee ugu sarreysa ee ku jira Midowga Yurub iyo saameynta ay ku leeyihiin siyaasadda, waxbarashada, madadaalada, deegaanka, warbaahinta, moodada, sayniska, dhaqanka, iyo farshaxanka oo dhan waxay gacan ka geysanayaan xaaladda ay tahay mid ka mid ah adduunka magaalooyinka waawayn ee caalamiga ah Real Madrid ayaa ku jirta gurigeeda labo kooxood oo caan ah, Real Madrid iyo Atlético de Madrid. Iyadoo ay ugu wacan tahay soo saaritaankeeda dhaqaale, heerkulka sare ee nolosha iyo cabbirka suuqyada, Madrid ayaa loo tixgeliyaa xarunta maaliyadeed ee ugu weyn ee Koonfurta Yurub iyo Jasiiradda Iberian; waxay marti-galisaa xafiisyada madaxa banaan ee ugu weyn ee shirkadaha waaweyn ee Isbaanishka, sida Telefónica, IAG ama Repsol. Madrid waa magaalada 10-aad ee ugu noolaanshaha adduunka oo dhan, sida ay ku qoran tahay majaladda Monocle, marka la eego shaxda 2017.
Madrid waxay ku taallaa Xarunta Hay'adda Dalxiiska ee Caalamiga ah (UNWTO), oo ka tirsan Ururka Qaramada Midoobay (QM), Xoghaynta Guud ee Ibero-American (SEGIB), Ururka Dib-u-celinta Mareykanka (OEI), iyo Guddiga Kormeerka Dadweynaha (PIOB). Waxa kale oo ay martigelisaa nidaamiyeyaasha waawayn ee caalamiga ah iyo dhiirrigeliyeyaasha luqadda Isbaanishka: Guddiga joogtada ah ee Ururka Iskaashiyada Isbaanishka, Xarunta Aqoonsiga Royal Spanish Academy (RAE), Machadka Cervantes iyo Foundation of Urgent Spanish (Fundéu BBVA). Madrid waxay qabanqaabisaa xafladaha sida FITUR, ARCO, SIMO TCI iyo Cibeles Madrid Fashion Week. Inkastoo Madrid ay leedahay hannaan casri ah oo casri ah, waxay ilaalisay aragtida iyo dareenkeeda badan oo ka mid ah xaafadaheeda iyo jidadkeeda. Meelaha ay ku yaalaan waxaa ka mid ah Palace Royal ee Madrid; Tiyaatarka Boqortooyada oo la soo celiyay 1850 Opera House; Buen Retiro Park, oo la aasaasay 1631; dhismaha Maktabadda qarniga 19-aad (aasaasay 1712) oo ay ku jiraan qaar ka mid ah kaydka taariikhiga ah ee Spain; Meelo badan oo matxafyada qaranka, iyo Saddex-xagalka Golden ee ku yaala Paseo del Prado oo ka kooban saddex matxafeed: Matxafka Prado, Matxafka Reina Sofía, madxafka farshaxan casri ah, iyo Matxafka Thyssen-Bornemisza, oo dhameystiraya ciladaha laba matxaf oo kale. Palace Cibeles iyo Fountain waxay noqdeen mid ka mid ah calaamadaha muqaalka ee magaalada. Madrid waa magaalada ugu booqashada badan Isbania.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid&oldid=227983"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Jannaayo 2022, marka ee eheed 13:21.